Izindaba - Ngemuva kwemibhikisho yobandlululo, kwaqoshwa izithombe e-US
Kuyo yonke i-United States, imifanekiso yabaholi be-Confederate nezinye izibalo zomlando ezixhumene nobugqila kanye nokubulawa kwabantu baseMelika bomdabu ziyadilizwa, zonakaliswe, zacekelwa phansi, zahanjiswa noma zasuswa kulandela imibhikisho ehlobene nokufa kukaGeorge Floyd, umuntu omnyama, emaphoyiseni Ukuboshwa ngoMeyi 25 eMinneapolis.
ENew York, i-American Museum of Natural History imemezele ngeSonto ukuthi izosusa isithombe sikaTheodore Roosevelt, umongameli wama-26 wase-US, ngaphandle komnyango wayo omkhulu. Lesi sithombe sikhombisa uRoosevelt egibele ihhashi, ezungezwe yi-African American kanye noMdabu waseMelika ohamba ngezinyawo. Umnyuziyamu awukasho ukuthi uzokwenzani ngalesi sithombe.
E-Houston, kususwe izithombe ezimbili ze-Confederate emapaki omphakathi. Esinye salezozithombe, i-Spirit of the Confederacy, isithombe sethusi esimele ingelosi ephethe inkemba negatsha lesundu, sasimi eSam Houston Park iminyaka engaphezu kwengu-100 futhi manje sisegumbini lokugcina impahla edolobheni.
Idolobha lihlele ukuhambisa lesi sithombe eHouston Museum of African American Culture.
Ngenkathi abanye befuna futhi bathathe izinyathelo zokuqeda lezi zithombe zeConfederate, abanye bayazivikela.
E-Richmond, eVirginia, isithombe sika-Confederate general Robert E. Lee sesibe yisikhungo sezingxabano. Ababhikishi bafuna lesi sithombe sisuswe, kanti uMbusi waseVirginia uRalph Northam wakhipha umyalelo wokuthi sisuswe.
Kodwa-ke, lo myalelo uvinjiwe ngesikhathi iqembu labanikazi bezindawo lifaka icala enkantolo yenhlangano liphikisa ngokuthi ukususa lesi sithombe kuzokwehlisa isithunzi sezakhiwo ezisondele.
IJaji likahulumeni u-Bradley Cavedo likhiphe isinqumo ngesonto eledlule lathi lesi sithombe siyimpahla yabantu ngokususelwa kutayitela lesakhiwo kusukela ngo-1890. Wakhipha isinqumo esasivimbela umbuso ukuthi usisuse ngaphambi kokuba kwenziwe isinqumo sokugcina.
Ucwaningo lwango-2016 olwenziwe yiSouthern Poverty Law Center, inhlangano engenzi nzuzo yezomthetho, luthole ukuthi kunezimpawu ezingaphezu kuka-1,500 zomphakathi ze-Confederate kulo lonke elase-US okuyizithombe, amafulegi, amapuleti ezilayisensi zombuso, amagama ezikole, imigwaqo, amapaki, amaholide nezisekelo zamasosha, ikakhulu ezigxile eningizimu.
Inani lezithombe ze-Confederate nezikhumbuzo ngaleso sikhathi kwakungaphezu kuka-700.
INational Association for the Advancement of Coloured People, okuyinhlangano elwela amalungelo abantu, isinxuse ukuba kususwe izimpawu zeConfederate ezikhaleni zomphakathi nezikahulumeni iminyaka. Kodwa-ke, kunemibono eyehlukene yokuthi ungabhekana kanjani nezinto zakudala zomlando.
"Ngikhathazekile ngalokhu ngoba lokhu kungumfanekiso womlando wethu, lokhu kungukubonakaliswa kwalokho ebesicabanga ukuthi kulungile," kusho uTony Brown, uprofesa omnyama wesocialology nomqondisi weRacism and Racial Experiences Workgroup eRice University. "Ngasikhathi sinye, kungenzeka ukuthi sinenxeba emphakathini, futhi asicabangi ukuthi kulungile futhi singathanda ukususa izithombe."
Ekugcineni, uBrown uthe angathanda ukubona lezi zithombe zihlala.
“Sijwayele ukufuna ukucwenga umlando wethu. Sivame ukufuna ukuthi ukucwasa ngokobuhlanga akuyona ingxenye yalokhu esiyikho, akuyona ingxenye yezinhlaka zethu, hhayi ingxenye yamagugu ethu. Ngakho-ke, uma ususa isithombe, usuke ucwebezela umlando wethu, futhi kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili, kuvame ukwenza ukuthi labo abasusa lesi sithombe bazizwe ukuthi benze ngokwanele, ”kusho yena.
Ukungakwenzi ukuthi izinto zihambe kodwa ukwenza izinto zibonakale ngomongo kuyiyona ndlela owenza ngayo abantu baqonde ukuthi ukucwaswa okugxilwe ngokujule kangakanani, kusho uBrown.
“Imali yesizwe sakithi yenziwa ngokotini, kanti yonke imali yethu iphrintwa nabelungu, kanti abanye babo babenezigqila. Uma ukhombisa lolo hlobo lobufakazi, uthi, linda umzuzu, sikhokha izinto ngokotini ophrintiwe nabanikazi bezigqila. Bese uyabona ukuthi ubandlululo lungene shí kanjani, ”kusho yena.
UJames Douglas, uprofesa wezomthetho eTexas Southern University kanye nomongameli wesahluko saseHouston se-NAACP, angathanda ukubona izithombe zeConfederate zisuswa.
“Abahlanganise lutho neMpi Yombango. Lezi zithombe zenzelwe ukuhlonipha amasosha e-Confederate nokwazisa abantu base-Afrika baseMelika ukuthi abantu abamhlophe baphethe. Zakhelwe ngenhloso yokukhombisa amandla abantu abamhlophe ababenawo kubantu base-Afrika baseMelika, ”kusho yena.
UDouglas uphinde abe ngumgxeki ngesinqumo sikaHouston sokuhambisa umoya weSithombe seConfederacy emnyuziyamu.
“Lesi sithombe siwukuhlonipha amaqhawe alwela amalungelo ombuso, empeleni labo abalwa ukugcina ama-Afrika aseMelika eyizigqila. Ngabe ucabanga ukuthi ukhona ongaphakamisa ukuthi kufakwe isithombe eMnyuziyamu Wokuqothulwa Kwesizwe esathi lesi sithombe sakhiwe ukuhlonipha abantu ababulala amaJuda egumbini likagesi? ” ebuza.
Izifanekiso nezikhumbuzo kwenzelwe ukuhlonipha abantu, kusho uDouglas. Ukuzibeka nje emnyuziyamu wase-Afrika yaseMelika akususi iqiniso lokuthi lezi zithombe zibahlonipha.
KuBrown, ukushiya izithombe zisendaweni akumhloniphi lowo muntu.
“Kimina, kukhombisa isikhungo. Uma unesifanekiso seConfederate, asisho lutho ngomuntu. Kusho okuthile ngobuholi. Kusho okuthile ngawo wonke umuntu osayine ngokubambisana kuleso sithombe, wonke umuntu othe leso sithombe sikhona. Angicabangi ukuthi ufuna ukusula lowo mlando, ”kusho yena.
UBrown uthe abantu kufanele bachithe isikhathi esiningi becabanga ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi "sinqume ukuthi lawo ngamaqhawe ethu ukuqala ngawo, sibheka ukuthi sinqume kanjani ukuthi lezo zithombe zilungile".
Umnyakazo weBlack Lives Matter uphoqa iMelika ukuthi iphinde ihlolisise okwedlule ngaphandle kwezithombe zeConfederate.
I-HBO isuse okwesikhashana ifilimu i-1939 Gone with the Wind ekunikezelweni kwayo nge-inthanethi ngesonto eledlule futhi ihlela ukuphinda ivuselele ifilimu yakudala ngengxoxo ngomongo wayo womlando. Le filimu igxekiwe ngokuqhakambisa ubugqila.
Futhi, ngesonto eledlule, iQuaker Oats Co imemezele ukuthi isusa isithombe sowesifazane omnyama emaphaketheni esithako sayo sokuxuba esineminyaka engu-130 nohlobo lwepancake u-Aunt Jemima nokushintsha igama layo. IMars Inc nayo yalandela ngokususa isithombe somuntu omnyama emaphaketheni ohlobo lwayo lwerayisi oludumile i-Uncle Ben's yathi izoletha kabusha.
Lezi zinhlobo ezimbili zagxekwa ngemifanekiso yazo eyinkolelo-ze nokusetshenziswa kwezihlonipho ezibonisa isikhathi lapho abantu baseNingizimu Afrika abamhlophe basebenzisa “umalumekazi” noma “umalume” ngoba bengafuni ukubiza abantu abamnyama ngokuthi “Mnu” noma “Nkosikazi”.
Bobabili uBrown noDouglas bathola isenzo se-HBO njengesinengqondo, kepha babheka ukuhamba kwalezi zinkampani ezimbili zokudla ngokuhlukile.
“Kuyinto efanele ukwenziwa,” kusho uDouglas. “Sithole izinkampani ezinkulu ukuthi zibone ubuqili bezindlela zabo. Basho, 'Sifuna ukushintsha ngoba siyabona ukuthi lokhu kungumbono omubi wabantu base-Afrika baseMelika.' Bayabona manje futhi bayasusa kubo. ”
KuBrown, ukuhamba kungenye yezindlela izinkampani ezidayisa ngayo imikhiqizo eminingi.
Ababhikishi bazama ukudiliza isithombe sika-Andrew Jackson, owayengumongameli wase-US, eLafayette Park phambi kweWhite House ngesikhathi kunemibhikisho yokungalingani ngokobuhlanga eWashington, DC, ngoMsombuluko. JOSHUA ROBERTS / REUTERS